Sucuudiga oo doonaya in uu laba arimood ka caawiyo Somaliland | Radio Hormuud
Sucuudiga oo doonaya in uu laba arimood ka caawiyo Somaliland
RH. Dawladda boqortooyada Sucuudiga ayaa la sheegay inay doonayso inay xidhiidh dhow oo cusub la yeelato Somaliland. Wargeyska Geeska Afrika oo ka soo baxa magaalada Hargeysa ayaa qoray in dawladda Sucuudigu go’aansatay inay Somaliland ka taageerto laba dhinac oo kala ah arrimaha horumarka iyo arrimaha ammaanka.
Waxaa xidhiidhka uu Sucuudigu doonayo inuu la bilaabo dawladda Somaliland uu qayb ka yahay loolanka u dhexeeya dawladaha Khaliijka, waxaanu Sucuudigu doonayaa inuu saamayn ku yeesho gobalka Geeska Afrika.
Indhaha cusub ee Sucuudigu ku soo eegayo Somaliland, ayaa soo baxay markii ay dhawaan dawladda boqortooyada Sucuudigu ku soo dartay liiska Xujaajta uu Boqorka dalkaasi martiqaado Madaxweyne-xigeenka Somaliland oo halkaas kula kulmay madax ka tirsan dawladda Sucuudiga oo u badnaa kuwa ammaanka iyo kuwa arrimaha horumarka iyo mucaawinooyinka. Martiqaadka ayaa la soo mariyay safaaradda Sucuudigu ku leeyahay dalka Djibouti.
Wararka waxay sheegayaan in saraakiil amni oo dawladda Sucuudiga ka tirsan iyo kuwa dhinaca mucaawinooyinka ahi ay madaxweyne-xigeenka iyo siyaasiyiin kale oo reer Somaliland ah kulamo xog urursi ah la yeesheen, waxaanay u sheegeen weftiga Somaliland inay doonayaan inay xidhiidh aan siyaasad ku salaysnayn oo ku saabsan arrimaha horumarka iyo ammaanka la yeeshaan Somaliland. Laakiin lama hubo in weftiga madaxweyne-xigeenku madaxda Sucuudiga u bandhigeen qorsheyaal ay sii diyaarsadeen oo ay Somaliland doonayso in Sucuudigu wax kala qabto.